All mkpa ka ị mara banyere Draịvụ
PS3 ike mbanye bụ dị ka ihe niile mpụga ike draịva. Ọ dị nnọọ mfe naghachi furu efu data si PS3 ike mbanye. GỤKWUO >>
Ị nwere ike naghachi data si ike mbanye na ọjọọ sectors site n'ịgụ a ndu na iji Wondershare Data Recovery omume effortlessly. GỤKWUO >>
Ihe site Alice MJ | 05.11.2015
Ike draịva a esighị ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ha na-egosi dị ka siri ike ngwaike ngwaọrụ, a obere akpachapụghị anya nwere ike ime ka a na diski ike ka malfunction ma ọ bụ njọ, kwụsị ịrụ ọrụ kpam kpam. GỤKWUO >>
E nwere ọtụtụ iri puku ihe ịrịba ama na gbapụta ka anya dị ka ike mbanye bụ mmekwata. A onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na draịvụ ike na-abụghị nanị dochie ASAP ma ndị dị mkpa Fi GỤKWUO >>
Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ na elu teknụzụ na-mepụtara na-eme ka n'aka na ọrụ na-nọ na nkasi obi mpaghara nke mere na ha na-eche dajụọ mmụọ nke tech pro GỤKWUO >>
Ozugbo i a paswọọdụ ekpochi ike mbanye, ị nwere ike na o siri ike agbake data. Ma i nwere ike igosi a ike mbanye paswọọdụ mgbake na data mgbake na a ndu GỤKWUO >>
Isiokwu a na-ewebata gị 5 top ike mbanye data mgbake software. Ị nwere ike iji ha na-agbake furu efu ọtụtụ iche iche nke data si dị iche iche ike draịva. GỤKWUO >>
Isiokwu a na-agwa gị banyere ndị nile na ike mbanye mgbake ngwaọrụ na mkpa ka ị mara GỤKWUO >>
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data gị ike mbanye, i nwere ike ịhụ na ndị obodo ike mbanye mgbake ọrụ ka mkpara ebe a iji nyere gị aka. GỤKWUO >>
Ọ bụrụ na ị nwere mgbake nkebi, ị nwere ike reinstall gị ime mfe. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ị furu efu gị partitions on ike mbanye? Nkebi mgbake software ga-enyere gị si. GỤKWUO >>
Ị a ike mbanye n'amaghị ama, na emeghị ndabere oké mkpa data? Ozi ọma ahụ bụ na unu ka nwere ohere ka unformat na draịvụ ike. GỤKWUO >>
A ike mbanye bụ kọmputa data ụlọ ahịa ie ya nwere niile data chọrọ maka kwesịrị ịrụ ọrụ nke na kọmputa gị nakwa dị ka data na ị nwere ike Ọzọkwa echekwara na ya dị ka music, phot GỤKWUO >>
Ike mbanye bụ ihe kasị ịdabere unit nke ọ bụla na kọmputa usoro. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị arụ ruo akara mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike na-usoro iji. Isi òkè nke ọ bụla na kọmputa usoro ie nke Gụọ More >>
N'ileghachi anya na-ere gị Windows PC ma ọ bụ Mac onye ọzọ? Ma ọ na-mkpa ka ịzụta a ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụ nanị maka ego, ị ga-eme ihe ọma na-ewepụ niile gara aga na ẹdude data si gị usoro. GỤKWUO >>
Ike disks bụ ihe kasị mkpa na kọmputa gị n'ihi na otu onye kpatara na i nwere ike ida gị zuru ezu data. Otú ọ dị, ị ga-mara na ike disks bụ n'ibu ngwaọrụ, na ga ada mgbe Lon GỤKWUO >>
N'agbanyeghị otú oké gị SATA HDD bụ, accidences nke data ọnwụ nwere ike ime n'ihi na ụfọdụ ihe. Isiokwu a gosiri gị otú naghachi data si SATA ike mbanye. GỤKWUO >>
Mpụga ike draịva dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa gị n'ihi na ihe niile, nke onye ọ bụla n'oge na-eme. Ha bụ n'ụzọ zuru okè na iji hụ na niile nke gị data na-ọma echekwara na ị gaghị ida GỤKWUO >>